Nhau - OLED kuratidza mutyairi IC (DDI) kupa kunogona kunge kwakaoma gore rinouya, zvichikanganisa kutumirwa kwenharembozha
OLED kuratidza mutyairi IC (DDI) kugovera kunogona kunge kwakaomarara gore rinouya, zvichikanganisa kutumirwa kwenharembozha
Zvinoenderana nemaindasitiri masosi, OLED kuratidza mutyairi ICs inogona kunge yakasimba muna 2022, izvo zvinokanganisa kutumirwa kwe smartphone.
Sekureva kweDigitimes mishumo, zvinyorwa zvakaratidza kuti vatengesi veDDI muTaiwan, vakaita saNovatek, Himax, Tuntai, uye Ruiding, vese vari kusimbisa kusimudzira nekugadzirwa kweOLED DDI, vachitarisira kuwedzera huwandu hwekutumira machipisi akadaro muna 2022. Panguva iyoyo. , maOLED skrini anotarisirwa kugamuchirwa zvakanyanya mumafoni matsva akachenjera.
Digitimes Tsvagiridzo inofanotaura kuti nharembozha yepasi rose OLED pani inotumirwa ichasvika 713 miriyoni muna 2022, asi OLED DDI kutumira kunongove 650-660 miriyoni, zviri pachena mukuwanikwa.
Pamusoro pezvo, masosi akati kushomeka chaiko kweOLED DDI yemafoni emafoni muna 2022 kuchaenderana nemhedzisiro yekutengesa kwemafoni ekupedzisira. Nekudaro, sezvo mwero wekupinda weOLED smartphones uchikwira zvishoma nezvishoma mumakore mashoma anotevera, kushomeka kwenguva refu kunotarisirwa kuwedzera.
Zvinonzwisiswa kuti mazhinji maOLED DDIs parizvino anogadzirwa mune gumi nemaviri-inch wafer machira achishandisa iyo 40nm maitiro, uye vanogadzira chip vari kushingaira kutsvaga rutsigiro rwekugona kubva kune vanovamba shamwari. "Novatek iri kusimbisa kudyidzana kwayo neUMC neSamsung. Himax, Duntech naRuiding vari kukwikwidzawo kuwana huwandu hwekutanga kubva kune vavanodyidzana navo, uku vachigadzira OLED DDI machipi ekutanga ekushandisa kugona, ”akadaro sosi.
Sezvo iyo 12-inch jira ichavhura akawanda ekuwedzera 28/22nm kugona muna 2023, vamwe vanoongorora maindasitiri vanotenda kuti vagadziri veDDI vanogona kushandura kubva pa40nm kuenda ku28/22nm kugadzirwa kuti varerutsire kusimba kweOLED DDI. Asi vamwe vanhu vanotenda kuti mamwe akawanda maapplication achavimba nehutsva hutsva, izvo zvinozotungamira kumakwikwi anotyisa pakati pevagadziri vechip.
Unoda kudzidza zvakawanda, wedzera wechat:
Nguva yekutumira: Nov-27-2021